Nyochaa ATFX 2020 - Ga-agụrịrị tupu imeghe Akaụntụ
$ 100 kacha nta ego
ATFX bụ onyinye mmeri zuru ụwa ọnụ gbasara ịkụ nzọ, Forex, na onye na-ere ahịa CFD nke dị na London.
kacha nta ego $ 100
trading Platform MT4 (web, desktọọpụ & mobile)
Onu ogugu 100
Ofdị Akụ ego, ngwa ahịa, ọla ndị dị oke ọnụ, akwụkwọ mpịakọta na ngwaahịa
ATFX bụ onyinye mmeri zuru ụwa ọnụ gbasara ịkụ nzọ, Forex, na onye na-ere ahịa CFD nke dị na London. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ikpo okwu ebe ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile nwere ike ịzụ ahịa ma nweta ego na ahịa ego. ATFX na-enyekwa ndị ahịa ngwaọrụ ndị ọzọ iji mee ka ha nwee ike nweta nsonaazụ kacha mma na azụmaahịa ha. ATFX bidoro na 2017 ma na-achịkwa Financial Conduct Authority (FCA). Ndị nwe ya bụ AT Global Markets, ụlọ ọrụ na-esonye na Usoro Ego Ego Ego. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-eji ihe atụ Electronic Communications Network (ECN) eme ihe site na iji teknụzụ nhazi.
ATFX Uru na ọghọm ya
Otu ụlọ ọrụ na-emeri mmeri na-enye ihe karịrị akụ 200.
A na-enye ndị ahịa niile akaụntụ ego ngosi n'efu.
Mgbasa asọmpi na-amalite na 0.6 pips na ụzọ EUR / USD.
A na-enye nyocha kwa ụbọchị n'efu.
Kalenda akụnụba zuru ezu n'efu.
Nchịkọta agụmakwụkwọ zuru oke maka ndị ahịa niile.
Nnukwu ikike nke ihe ruru 400: 1
ATFX anaghị enye ETF na agbụ dị ka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na-enye.
ATFX enweghị atụmatụ ịkagbu azụmahịa.
ATFX anaghị enye atụmatụ ọnya oyi.
ATF enweghị njirimara oyiri
ATFX na-enye ihe karịrị 200 akụ na nyiwe ya. Gbanye ego, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị isi dịka EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, na NZD / USD. Ọ na-enyekwa obere ego dịka AUD / CAD, GBP / JPY, NZD / CAD, na NZD / CHF. O nwekwara ihe ndi ozo dika EUR / HUF, USD / MXN, na USD / DKK n'etiti ndi ozo.
ATFX na-enyekwa Ngwa ahia dị ka mmanụ, mmanụ gas, na ọka. O nwekwara ọla ndị dị oke ọnụ dịka ọla edo, platinum, palladium, na ọla ọcha. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa indices dị ka Dow Jones Industrial Average, DAX, na S&P 500. Ọ na-enyekwa cryptocurrencies dị ka Bitcoin, Ethereum, na Ripple. N'ikpeazụ, ATFX na-enye mbak dịka Amazon, Apple, na Google.
Otu ụlọ ọrụ na-enye ngwaahịa ndị a niile bụ ihe dị mma n'ihi na ọ na-enye ohere maka iche iche. Ọ na-enye ndị ahịa ohere inwere onwe ha ịzụ ahịa na akụ ha nwere mmasị ma ọ bụ mara nka.
Leverage bụ ego ọzọ nke onye na-ere ahịa na-enye onye ahịa ya ịzụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere $ 100 ma họrọ ọnụọgụ ego 100: 1, ọ pụtara na ị nwere ike iji $ 10,000 zụọ ahịa. Na 2018, mgbe European Union bịanyere aka na iwu MIFID, oke nkwụnye ego maka ndị ahịa EU ghọrọ 30: 1.
N'ikwekọ na ụkpụrụ ndị a, ATFX na-enye mmụba kachasị nke 30: 1 maka ndị ahịa Europe. Ego kachasị maka indices, mbak, ngwaahịa, na crypto bụ 20: 1, 5: 1, 20: 1, na 2: 1 n'otu n'otu. Maka ndị ahịa ụwa, ikike kachasị maka ego, ndeksi, mbak, ngwaahịa, na crypto bụ 400: 1, 100: 1, 20: 1, 400: 1, na 20: n'otu n'otu. Tebụl dị n'okpuru na-egosi ntụle nke leverage ndị a.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ATFX anaghị enweta ego site n'ịkwụ ụgwọ ọrụ na azụmaahịa. Kama, ụlọ ọrụ ahụ na-enweta ego site na mgbasa. Mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti ịrịọ na ọnụ ahịa ego. Chaatị dị n’okpuru na-egosi mgbasa ụlọ ọrụ ebubo gafee akụ ya.
ATFX ofdị Akaụntụ
ATFX na-enye ndị ahịa ya ụdị akaụntụ anọ. A na-ahazi akụkọ ndị a iji kwado ụdị ndị ahịa dị iche iche. Typesdị akụkọ ndị a bụ:
Obere akaụntụ - Nkwụnye ego kacha nta na obere ego bụ $ £ € 100. Ihe nkwụnye ego kachasị ruo 30: 1 ka mgbasa ahụ na-amalite site na 1.0 pip.
Akaụntụ ọkọlọtọ - Nkwụnye ego kacha nta na akaụntụ ọkọlọtọ bụ $ £ € 500. Ihe nkwụnye ego kachasị ruo 30: 1 ka mgbasa na-amalite na 1.0 pip.
Edge akaụntụ - Nkwụnye ego kacha nta na akaụntụ Edge bụ $ £ € 5,000. Onu ogugu kachasi bu 30: 1 ka mgbasa na-ebido na 0.6 pip.
Akaụntụ ego - Akaụntụ kachasị elu nwere nkwụnye ego kacha nta nke $ £ € 10,000 na leverage ruo 30: 1. Akaụntụ a na-akwụ ụgwọ ọrụ nke ihe ruru $ 25 kwa mio kwa n'akụkụ.
Akaụntụ ọkachamara - Akaụntụ a nwere nkwụnye ego kacha nta nke $ £ € 5,000. Ọ nwere ikike kachasị elu nke 400: 1. Mgbasa na-amalite site na 0.6 pip.
Edge, adịchaghị, na akaụntụ ndị ọkachamara nwere mgbakwunye ndị ọzọ dị ka njikwa akaụntụ adịchaghị, oge Skype na Chief Market Strategist, na akwụkwọ ịkpọ oku na mmemme ATFX. Tebụl dị n'okpuru na-egosi ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ụdị akaụntụ ndị a.
Ikike ATF Trading
ATFX na-enye ndi ahia ya MetaTrader 4 platform. MT4 bụ usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu n'ụwa. Ikpo okwu na-enye ọtụtụ atụmatụ dịka akara ngosi omenala, ịzụ ahịa akpaghị aka na ndị ndụmọdụ ọkachamara, ngwaọrụ eserese, yana ịnweta ahịa MQL5. ATFX na-enyekwa gam akporo na iOS ụdị MT4. Ọ na-enyekwa nsụgharị weebụ nke MT4.
N'adịghị ka ndị ọzọ na-ere ahịa, ATFX enweghị usoro azụmaahịa ya. Na mgbakwunye, ọ naghị enye MetaTrader 5 na usoro ntanetị ndị ọzọ.
Nkuzi: Otu esi edebanye aha na ahia na ATFX
Usoro ịdenye akaụntụ na ATFX dị mfe. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, anyị na-akwado ka ịmalite site na ịmepụta akaụntụ ngosi. Na n'ụlọ peeji nke, ị kwesịrị ị na-eso ndị njikọ gosiri na uhie n’okpuru.
Na njikọ a, a ga-ajụ gị ịbanye nkọwa ole na ole gbasara onwe gị. Ndị a bụ aha mbụ na aha ikpeazụ gị, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, ụdị akaụntụ ị họọrọ, ego akaụntụ, na ego ịchọrọ ibido. A ga-enye gị ohere ibudata MT4.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ahụmahụ ozu ahia, ị kwesịrị ị na-aga ogologo na- meghee akaụntụ ndụ peeji. Na ibe a, a ga-ebu ụzọ gwa gị ka ịhọrọ asụsụ ị họọrọ. Kwesịrị ịbanye nkọwa nkeonwe, nkọwa ego, ahụmịhe, ihe ọmụma gbasara ego, na nnabata dị ka egosiri n'okpuru.
You banyechara nkọwa ndị a, ịkwesịrị itinye akwụkwọ nkeonwe gị dịka kaadị njirimara na ihe akaebe nke ebe obibi. Iwu chọrọ nke a. A na-eji ya iji hụ na ụlọ ọrụ na-asọpụrụ ndị ahịa gị (KYC) na iwu mgbochi ego (AML).
Mgbe nke a gasịrị, ịkwesịrị ibudata MT4, mepụta akaụntụ MT4, tinye ego na akaụntụ gị, bugharịa ya na MT4, wee bido ịzụ ahịa.
ATFX bụ ụlọ ọrụ nke Financial Conduct Authority (FCA) na-achịkwa. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ kwesịrị irubere iwu isi. Typedị nkwenye mbụ bụ nkwenye email. Do na-eme nke a site na ịpị njikọ ezitere gị ozugbo ị debanyere aha. Mgbe nke a gasị, ị ga-ebugo ID gị ma ọ bụ paspọtụ gị na ihe akaebe nke ebe obibi.
Udo nke nkwụnye ego na iwepụ dị ezigbo mkpa. Ndị ahịa chọrọ inwe obi iru ala maka transact. Ha choro ka nkwụnye ego na ịwepụ na ngwa ngwa. ATFX na-enye usoro ụzọ atọ nke nkwụnye ego. Ọ na-anabata kaadị akwụmụgwọ na debit, e-wallets dị ka Skrill, Neteller, na SafeCharge, na nkwụnye ego ụlọ akụ.
Ego na kaadị debit na e-wallets na-erughi nkeji 30 iji tụgharịa uche na akaụntụ gị. Nyefe ụlọ akụ na-ewe ogologo oge mana nke a dabere na ụlọ akụ na mba si.
Na ndọrọ ego, ụlọ ọrụ na-anabata kaadị akwụmụgwọ na debit, e-wallets, na nnyefe ego. Dị ka nkwụnye ego, ụlọ ọrụ ahụ na-anata ego na euro, USD, na sterling. Ego a na-ewe ihe dị ka otu ụbọchị ọrụ iji kpochapụ.
Kwụ ụgwọ na ịdọrọ, ị dị nnọọ mkpa iji gaa na akaụntụ gị dashboard, họrọ usoro ị chọrọ, na mgbe ahụ na-eso usoro.
ATFX dị n'okpuru iwu na nlekọta nke Financial Conduct Authority (FCA). Nke a bụ isi nchịkwa na United Kingdom. Nọmba FCA ya bụ 760555. Nọmba ụlọ ọrụ aha ya bụ 09827091. Dịka mba dị na European Union, ATFX na-arụ ọrụ na nrube isi na Ahịa na Ntuziaka Ngwaọrụ Ego (MIFID II).
Ọrụ ndị ahịa ATFX
ATFX etinyela ego dị ukwuu na ọrụ ndị ahịa. Na weebụsaịtị, ndị ahịa nwere ike iji atụmatụ nkata na-ekwurịta okwu na ụlọ ọrụ. Ha nwekwara ike ịkpọ oku site na iji ekwentị ndị ọrụ aka (0800 279 6219 ma ọ bụ + 44 203 957 7777). Ha nwekwara ike izipu ozi ịntanetị.
Olee otu ATFX si jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ere ahịa
ATFX yiri ndi ozo ndi ozo. Ọ na-enye usoro MT4 nke ọtụtụ ndị ọzọ na-azụ ahịa na-enye. O nwere uzo nyocha ahia, dika ndi ozo ndi ozo. O nwekwara kalenda akụ na ụba dịka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ. Ọrụ ndị ahịa na iwepụ ego na nkwụnye ego yiri ihe ndị ọzọ na-eweta.
ATFX ọ bụ nchekwa Broker?
ATFX bụ ezigbo onye na-ere ahịa. Ọ dị n'okpuru nlekọta nke FCA, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị sie ike nchịkwa n'ụwa. Ọ bụ ụlọ ọrụ meriela ọtụtụ enọ ma nwee nkwado ọtụtụ ihe omume egwuregwu. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa nnukwu mgbasa, nke nwere ike inyere ndị ahịa aka ịchekwa nnukwu ego.
Nkwụnye ego ụlọ akụ,